Mpikarakara hetsika ao Korea | Mpikarakara ny fihaonambe matihanina any Korea
1. Toerana tokana
Fahaiza-manao: Efitra 5, mijoro: 200 ~ 1,500, mipetraka: 150 ~ 1,300 (Unit: person)
Sehatra mamorona / Trendy / 5 miaraka amin'ny Fitaovana 15
Fahaiza-manao: Efitra 8, mijoro: 80 ~ 1,000, mipetraka: 60 ~ 500 (Unit: person)
Zavamaniry / Manankarena / Andrefana
Fahaiza-manao: Efitra 10, mijoro: 50 ~ 100, mipetraka: 20 ~ 146 (Unit: person)
Masakan'i Royal nentim-paharazana Korea / Fampisehoana Koreana
Fahaiza-manao: Efitra 5, mijoro: 60 ~ 200, mipetraka: 40 ~ 120 (Unit: person)
Hanok / Zava-tantara / fijery voajanahary
Fahaiza-manao: Efitra 2, mijoro: tsy hita, mipetraka: 60 ~ 197 (Unit: person)
Fampisehoana / fahitana amin'ny alina / renirano Han
Sevit Floating nosy (Sevit Some)
Fahaiza-manao: Efitra 4, mijoro: 300 ~ 1,000, mipetraka: 160 ~ 550 (Unit: person)
Han-renirano fahita voalohany mitsangatsangana
2. Fitsangatsanganana miavaka
Mianara ny Zavak'i Taekwondo
Korea fahandro traikefa
Ny Etourism dia manome hetsika izay miara-miasa amin'ny hetsika tsy manam-paharoa ho an'ny fananganana ekipa, ny fandraisana andraikitra na orinasa. Miankina amin'ny hetsika ara-batana toa ny K-pop dihy kilasy sakafo Koreana, ary Taekwondo izay azo atao manokana any Korea. Ny hetsika dia ahafahan'ny mpiasa miala ao amin'ny birao sy hanana fotoana miala voly ary mamela hevitra vaovao hivoatra. Ny orinasa dia afaka misafidy ny fitsidihana efa niorina mialoha na fangatahana ny fitsangatsanganana efa niorina tamin'ny tanjona sy ny tombontsoan'ny ekipa.
3. Fitantanana toerana
Etourism dia orinasa mpitantana toerana hotrandrahana izay mahavita manofana trano, fitaterana, toerana fanaovana fihaonambe, trano fisakafoanana, hetsika fanta-daza ary sakafo hariva. Ny antsipiriany fitantanana tsara dia mitarika ho amin'ny fandaminana milamina, izay ahafahan'ny elanelan'ny orinasa hifantoka amin'ny fandaharan'asa na ny fivoriana.
Avy amin'ny hotely kintana 5 maoderina ka hatrany amin'ny hotely Koreana nentim-paharazana Koreana dia afaka manome trano hipetrahana manerana ny firenena ny Etourism.
Misafidiana malalaka amin'ny karazana fiara mandeha amin'ny bisy mpitaingina 45, bisy 25 seater deluxe, 7 ~ 9seater van mankany Sedan ho an'ny lehiben'ny orinasa na manamboninahitra ambony.
Manam-pahefana sy Mpampiasa Tetikasa
Ny Etourism dia vonona hatrany hanampy ny filanao hahomby amin'ny fivoriana.
Sehatra famoronana sehatra
Sakafo (Buffet na course)
Sotro & toaka
Performance (K-pop, DJ, sns).